Syria: Miditra An’i Hama Ny Fiara Mifono Vy Ny Hariva Mialoha Ny Ramadany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Aogositra 2011 16:24 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Ελληνικά, Português, Italiano, Español, Nederlands, বাংলা, Aymara, 繁體中文, 简体中文, English
Ny hariva mialoha ny Ramadany, niditra ny tanànan'i Hama ny andian-tafika Syriana, ary voalazan'ny tatitra fa namono olona betsaka efa ho 45 teo amin'ny tamin'ny 11:00 antoandro teo ny Alahady 31 Jolay. Manana ny akony manokana ilay fanafihana ho an-dry zareo Siriana, satria ny tanànan'i Hama no toerana nisian'ny vono moka lehibe indrindra teo amin'ny tantara tamin'izao vaninandro maoderina izao.
Ny ankamaroan'ireo bitsika tamin'ny ora voalohany dia samy nitondra ho any amin'ilay vaovao avokoa, na dia ireo maro avy any Syria aza, ary ireo avy any ivelany dia samy nanameloka avokoa ilay famonoana, ka misy amin'ireny ny maneho hatezerana noho ny tsy fisian'ny fanamelohana iraisam-pirenena. Ny sasany koa, tahaka an'i deekelgen963, dia naneho ahiahy momba ny tatitra avy ao Hama.
Amin'ireo tatitry ny fijery avy eny ifotony tonga amin'ny Twitter, iray no misongadina. Mitattra i Debkafile hoe: “Tapaka ny rano, herinaratra, fifandraisana an-telefaonina ho an'ireo mponina 400.000 ao Hama”.
Mandritra izany, avy ao anatin'i Hama, lahatsary vitsivitsy no mipoitra.
Lahatsary mangovitra iray avy amin'ny Shams News Network no mampiseho fiara mifono vy miditra ny tanàna :
Lahatsary iray hafa mampiseho setroka mainty miakatra avy ao an-tanàna :
Shaimaa Khalil, mpanao gazety ao amin'ny BBC no nanipika lahatsary iray mivantana avy ao Hama, izay azo jerena ato ny tahirin'izy io.
Noho ny tsy fisian'ireo mpanao gazety matihanina ao Hama, ny fitaterana ny vaovao dia miankina betsaka amin'ireo mafàna fo sy ny fanaovan-gazetin'olon-tsotra, izay tena fivarotana aina ho azy ireo tokoa ny fakàna saripika sy lahatsary. Vokany, taraiky be matetika ny vaovao vao mitete, saingy ny sasantsasany amin'ireo Siriana mafàna fo, toa an'i @wissamtarif sy @malathaumran dia manohy hatrany mibitsika ny vaovao .